Umzi mveliso weBhola eWheyini yeBhola yeW Wool kunye nabavelisi | Huasheng
Iibhola ezomileyo zoboya zihlala zisenziwa ngo-100% wohlobo lwaseNew Zealand. Abayi kutyhila kwaye baya kuhlala iminyaka. Ubungakanani babo bulungile ngokugqibeleleyo ngokobuninzi bokwenza oko. Zilungile ngokufihla izinto zeentsiba ezinje ngeequilts kunye neejakethi. Sebenzisa iibhola zokuomisa uboya zigcina ulusu lwakho kwiikhemikhali ezisetyenziswa kumashiti owomileyo kwilaphu kunye nolwelo lwelaphu engamanzi, kwaye ikwagcina nesomisi sakho kwintsalela eseleyo kwezi. Luhlobo loqoqosho olunezinto ezinamachiza amdaka kunye netyhefu eyomileyo kunye nabaphethe iilaphu. Ziyacetyiswa ikakhulu iidayile zeentsana kunye nempahla yokunxiba, kunye nabantu abanolusu olubuthathaka.
* Zama ukukroba iibhola zokuomisa ngokubeka amaconsi ambalwa eoyile eyimfuneko (i-lavender, ilemon, njl.njl) kwibhola nganye. Oku kuya kuvumba kancinci iingubo zakho!
* Unciphise i-static ngokuthe kratya ngokuqinisekisa ukuba impahla ayinxokiwe. Zama ukuthatha iimpahla kwangoko kunokuba uqhele ukwenza.
* Iipakethi ezi-3 zeeBhola ezomileyo zoMthwalo omncinci.
* Iipakethi ezi-6 zeeBhola ezomileyo zoMthwalo Womthwalo omkhulu.
Kutheni ukhetha iibhola zethu zoMchela zoboya?
Khulula i-Static and Laurery ethambileyo: Inceda ukunciphisa ukubambelela okuqinileyo ngokunciphisa unxibelelwano phakathi kweengubo. Impahla iya kuhlanjwa ngokwendalo kwaye imibimbi ithintelwe ngokukuko ngenxa yokunciphana koxinizelelo.
Unakekele iilaphu zakho noLusu: Izinto eziphilayo, i-eco-laundry, hypoallergenic, akukho khemikhali okanye zongezelelo eziyingozi. Ilungele ulusu olubuthathaka, iitawuli, abathuthuzeli, iimpahla, iimpahla zokuhlamba iimpahla zabantwana, iilokhwe zelaphu kunye nezimpahla zokufuya izilwanyana, njl. Gcina ixesha lakho kunye naMandla: Iibhola zoboya ezifunxa amanzi ziqukuqela zijikeleze kwindawo eyomileyo, yenza ingubo ukuze yome ngokukhawuleza, ikhuphe amanzi amaninzi ngaphandle. kweengubo zakho.Nciphisa ixesha lakho lokomisa nge-20% -45%.
I-Eco-Friendly Choice: Ngokungafaniyo nokomisa iihemetshi ezifuna ukuphonswa kude emva kokuba zisetyenzisiwe, iibhola zethu ezinokuphinda zisebenze ziya kukunceda ugcine imali, unciphise inkunkuma kwaye ugcine iimpahla zakho zithambe ngakumbi kunangaphambili.
1. Ukubopha ngokubhaliweyo ngesandla, kunokusetyenziswa okuphindaphindiweyo
2. Ukucoca ngokukhawuleza, ukonga amandla
3. Ukucutha umbane oqinileyo
4. Uboya bendalo, akukho khemikhali
1. Sebenzisa iibhola ezi-3-4 kumthwalo omncinci / ophakathi kunye ne-5,6 iibhola zomthwalo omkhulu.
2. Ukuzisebenzisa, zibeke kwindawo eyomileyo kwaye ubashiye apho. Elula!
3. Unokongeza ivumba kwindawo yakho yokuhlamba ngokubeka amaconsi ambalwa eoyile nganye kwibhola nganye.
4. Akukho sidingo sokucoca iibhola zakho zomomileyo zoboya kuba zisebenza kuphela kwindawo eyomileyo nezingubo ezicocekileyo
5. Nangona kunjalo, ukuba bafuna ukucocwa yindawo nje ku-washer kufudumele kwaye yomile kwindawo eyomileyo.
Edlulileyo: Tyhisha isikhwama (icala lokubonakala leglasi)
Okulandelayo: Utyibilikile uWool wenziwe